«Aza mampme e!» -
AccueilTresaka«Aza mampme e!»
07/06/2018 admintriatra Tresaka 0
Dia mihevitra ny tenany ho izay mihitsy ireto mpitarika sendikaly sasantsasany ireto? Tao ireo nanambara fa tsy tonga teo amin’ny toerany mihitsy hono ny praiminisitra Ntsay Christian raha tsy nisy ny hetsika sendikaly nataon’izy ireo teny amin’ny 13 Mey. Tena « aza mampme e! ». Oviana ary taiza no nisy fihaonan’ireo fikambanambe iraisam-pirenena tamin’ireo mpitarika sendikaly ireo ka nandraisana fanapahan-kevitra niraisana hoe ranona no hatao praiminisitra?
Tsy ny mpitarika sendikaly velively koa no vy nahitana io hetsika tetsy amin’ny 13 Mey io fa ireo solombavambahoaka avy amin’ny MAPAR sy ny TIM. Nataon’ireto antoko politika ireto fitaovana, izay no azo ilazana azy, nanomezana hery ny hetsika nataon’izy ireo ny sendika. Raha ny marina izany, dia ireto solombavambahoaka ireto no tokony nampanantena valiny tamin’ny fitakian’ireo sendika. Avy amin’ny MAPAR mantsy izany izao ny praiminisitra, mitodika any amin’ny MAPAR izany izao ny mason’ny mpanara-baovao amin’ny famaliana ny hetahetan’ireo mpitarika sendikaly.
Raha ny zavatra fantatra koa mantsy dia ny hoe “hanatanteraka sy hikarakara fifidianana madio sy eken’ny rehetra” no tena andraikitr’ity governemanta manaraka ity, izany hoe, mbola tsy ho amin’izao mandà izao mihitsy akory no handinihana sy hamahana ireo olana nasongadin’ireny sendika ireny. Izay no ilazana hoe “aza mampme e!”. Nampiasain’ny TIM sy ny MAPAR fotsiny ianareo na dia fantatr’izy ireo tsara izao aza fa tsy afaka ny hamaly sy ny hanome fahafaham-po ny fitakiana izy ireo.
Adinon’ireo mpitarika sendikaly fa olana ara-tseza sy fahefana no mibahana ao an-tsain’ny mpanao politika. Jereo fotsiny ny zava-misy amin’izao fotoana, moa va tsy efa miala moramora mampandry adrisa sisa no ataon’ny MAPAR sy ny TIM, satria efa azon’izy ireo izay notadiaviny. Efa impiry no nilazana teto hoe “aza manaiky ataon’ny olona fitaovana, efa betsaka izay nanaovana tohatra fiakarana izay”. Izao ka lasa fangalam-pierin’ny saka sy voalavo sisa.